China Tiamulin hydrogen fumarate Kugadzira uye Fekitori | Veyong
Molecular fomura: C32H51NO8S
Tiamulin hydrogen fumarate is a derivative of pleuromutilin, inogona kushandiswa mumushonga wezvipfuyo kunyanya yenguruve nehuku.Iyo diterpene antimicrobial ine pleuromutilin kemikari chimiro yakafanana neiyo yevalnemulin.
Tiamulin hydrogen fumarate yakachena kana ingangoita chena poda yemucheka, isina hwema uye isinganake. Inonyungudika nyore nyore mu methanol kana ethanol, inosungunuka mumvura, yakanyungudika zvishoma muacetone, uye ingango nyungudika mu hexane.
Mamiriro ekuita uye hunhu
Ichi chigadzirwa ibhakitiriya bacteriostatic, asi zvakare ine bactericidal maitiro pane anonzwisisa mabhakitiriya pakakwirira zvakanyanya. Iyo inorwisa mabhakitiriya mashandiro ekuita ndeyekudzivirira bhakitiriya mapuroteni synthesis nekusunga kune iyo 50s subunit yebhakitiriya ribosome.
Tiamulin hydrogen fumarate ine yakanaka inorwisa mabhakitiriya kurwisa dzakasiyana siyana dzeGram-yakanaka cocci, inosanganisira yakawanda staphylococci uye streptococci (kunze kweboka D streptococci) uye akasiyana siyana emycoplasmas uye mamwe ma spirochetes. Nekudaro, iyo antibacterial chiitiko kune mamwe mabhakitiriya asina kusimba haina kusimba, kunze kwemhando dzeHaemophilus uye mamwe E. coli neKlebsiella strains.
Tiamulin hydrogen fumarate iri nyore kupinza mushure mekutaurwa kwemuromo munguruve. Inenge 85% yedhizaini imwe inosvirwa, uye kukwirisa kwepamusoro kunoitika mumaawa maviri kusvika mana. Inoparadzirwa kwazvo mumuviri, iine yakanyanya kusangana mumapapu. Tiamulin hydrogen fumarate inogadziriswa mumuviri kuita makumi maviri emetabolite, mamwe aine runyararo rwekurwisa mabhakitiriya. Inenge makumi matatu kubva muzana emametabolite anoburitswa mumuti uye zvakasara zvinoburitswa mutsvina.
Tiamulin hydrogen fumarate inoshandiswa pakurapa nguruve pneumonia inokonzerwa neActinobacillus pleuropneumoniae uye nguruve yeropa dysentery inokonzerwa neTreponema hyodysenteriae. Sekudya chinodhaka chinowedzera chenguruve chinogona kusimudzira huremu Izvo zvinoshandawo pakurwisa chirwere chisingaperi chekufema muhuku, mycoplasma hyopneumonia, uye staphylococcal synovitis muhuku.
25kg / kadhibhodhi dhiramu
10%, 45% 80% Tiamulin hydrogen fumarate premix / yakasviba poda
Pashure: Oxytetracycline Hydrochloride